Maraykanka oo xiisada doorashada kala hadlay Rooble xilli uu cadeeyay mowqifka khilaafka! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Maraykanka oo xiisada doorashada kala hadlay Rooble xilli uu cadeeyay mowqifka khilaafka!
Maraykanka oo xiisada doorashada kala hadlay Rooble xilli uu cadeeyay mowqifka khilaafka!
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayay khadka telefoonka ku wada hadleen Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka u qaabilsan Afrika Molly Phee, waxa ayna iska waraysteen xaaladda siyaasadeed, amniga iyo doorashooyinka dalka.
Wada hadalkaan ayaa imaanaya iyada oo Antony Blinken, xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka, uu markale ku celiyay diidmada Mareykanka ee isku daygii Farmaajo uu shaqadda uga joojiyay Maxamed Xuseen Rooble.
Mowqifkan ayuu mar kale muujiyey kadib wadahadalo dhanka telefoonka ah oo uu la yeeshay hogaamiyaha waddana Kenya, Uhuru Kenyatta, sida ku xusan qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda.
Xoghayuhu ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in madaxda qaranka iyo dawladdaha xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ay si degdeg ah u soo gebagebeeyaan doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha oo laga ilaaliyo wax is-daba-marin khatar gelinaya kalsoonida natiijada.
Xoghayuhu waxa uu xusay in Maraykanka ay ka soo horjeedaan isku daygii lagu doonayay in lagu hakiyo shaqada Ra’iisal Wasaare Rooble, waxa ayna isku raaceen in dhammaan dhinacyada ay khusayso ay ka waantoobaan ficilada iyo hadalada sii kicinaya.
Talaabadda uu Mareykanka xaaladda Soomaaliya kala hadlay Kenya ayaa u muuqata mid uu ku doonayo in uu cadaadiska ku kordhiyo Farmaajo kaasoo la rumeysan yahay in khilaafka kala dhaxeeya uu xoogeystay.
Next articleUNITED NATIONS SUPPORT OFFICE IN SOMALIA – FIELD SECURITY ASSISTANT (3 POSITIONS)